DAAWO: Xasan Sh oo Aflagaadadii ugu xooganeyd kula kacay Sh Shariif, Farmaajo, CC & C/Raxmaan C/Shakuur | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
DAAWO: Xasan Sh oo Aflagaadadii ugu xooganeyd kula kacay Sh Shariif, Farmaajo, CC & C/Raxmaan C/Shakuur
Musharrax Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horreysay si aan gambasho lahayn waxa uu weerar afka ah ugu qaadey musharraxiin isaga uu aad uga cabsi qabo in meesha ay kala wareegaan.
Musharraxiinta uu weeraray ayaa kala ah Shariif Sheekh Axmed oo maalmahan dambe ad u dhaliilayey Xasan Sheekh, C/raxmaan C/shakuur, Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid iyo Farmajo oo haysta taageerada shacabka.
Waxa uu sheegay Xasan in hadda xil madaxweyne ay isku soo sharaxeen rag uu ku sheegay iney dayceen baddii Soomaaliyeed, islamarkaana gacan cadow geliyey, isaga oo hadalkaasi kala jeeday Sheekh Shariif, Cumar iyo C/raxmaan oo soo wada shaqeeyay.
RIIX HALKAAN OO DAAWO MUUQAALKA
Mar uu ka hadlay Farmaajo ayuu sheegay in hadda ay is soo sharxeen rag Kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed haystay, sidoo kalena shacabka oo waddooyinka isugu soo baxay, walibana leh ha tagin iska cararay isaga oo marmarsiyo ka dhiganaya Ajnabi ima rabo waa sida uu sheegayo Xasane.
Hadaba Xasan Sheekh ayaa markaan u muuqda mid aan gambasho lahayn, islamarkaana cid walbo oo uu uga baqo kursigiisa doonaya inuu meesha ka saaro.